कांग्रेस विश्वासको मतको विपक्षमा | Sagarmatha TV
कांग्रेस विश्वासको मतको विपक्षमा
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने भएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्वासको मतलाई विफल बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनका लागि जुन प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’, सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘यो विश्वासको मतलाई असफल पार्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ।’ यस विषयमा अन्य दलसँग पनि कुरा गर्ने निर्णय भएको उनले सुनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक मूल्यमान्यता भत्काइरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। ‘अल्पमतमा पुगेपछि जबरजस्ती ढंगले लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री राखिराख्ने काम भएको छ। त्यो केन्द्रकै निर्देशनमा भएको हो। यस्ता असवैधानिक क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यसको समीक्षा गरेर भत्र्सना गरेका छौ’, उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन राख्न ढिला भइसक्यो। कोभिड महामारीको अवस्था छ। यी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला विश्वासको मतको कुरा ल्याइयो। त्यसैले ओलीजीलाई फेल गराउन लाग्ने लाग्ने कुरो भएको छ।’
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न भनेको छ। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई काठमाडौं बोलाएको छ। उक्त पार्टीमा यो सरकारप्रतिको धारणामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षबीच विवाद रहँदै आएको थियो। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले लुम्बनी प्रदेशमा चार सांसदलाई निष्कासन गरेपछि पार्टी फुटकै अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका घर–घर गई हस्ताक्षर गरी डा. भट्टराई र यादव पक्षले चार सांसदको पद खोसेको आरोप अध्यक्ष ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले लगाएको छ।
ठाकुर पनि आफूलाई संसदीय दलका नेता चुन्न र ओलीको पक्षमा मतदान गर्न सांसद र कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरमा जुटेका छन्,। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर गराएको दाबी यो पक्षले गरेको छ। डा. भट्टराई र यादव पक्ष ओलीको बहिर्गमन कसरी गर्ने भनेर माओवादी केन्द्रसँग मिलेर रणनीति बनाउन सक्रिय छन्। डा. भट्टराई र यादव पक्ष पनि हस्ताक्षर संकलनमा जुटेको छ।
सत्तारुढ एमालेमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका दुई खेमा छन्। ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि फ्लोर क्रस गर्ने कि सामूहिक राजीनामा दिने भन्नेमा नेपाल पक्ष अन्योलमा देखिएको छ। नेपाल पक्ष पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडानमा छ। तर, आफ्नै पक्षका नेता तथा सांसदले छोड्दै गएका कारण यो अडानमा टिकिरहन समस्या हुँदै आएको देखिन्छ।
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मेटमणि चौधरीले २०७५ जेठ २ को अवस्था फर्केर आत्मालोचना गरे सरकार टिकाउन र पार्टीलाई एक बनाउन लाग्न सकिने बताए।
‘वैशाख २७ गते नै सामूहिक राजिनामा दिने वा फ्लोर क्रस गर्ने वा अन्य त्यो भन्दा राम्रो विकल्प के हुन्छ, त्यो गर्छौ’, अर्का एक नेताले भने, ‘एउटा पक्ष डण्डा लगाइरहने, अर्को पक्ष थापिरहने त हुँदैन नि !’ एक/एक गरेर बोलाउने, थर्काउने काम गरिरहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३० प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्।